Margarekha » आखिर किन अहिले डिप्रेसनले हामीलाई लखेट्दैछ ?
आखिर किन अहिले डिप्रेसनले हामीलाई लखेट्दैछ ?
विश्व स्वास्थ्य सूचांकले देखाइसकेको छ, ‘डिप्रेसन अब विश्वको लागि टाउको दुखाईको विषय बन्नेछ ।’ अहिले हामी डिप्रेसनको दलदलभित्र फस्दैछौं । हाम्रा घरमा कति सदस्य यस्ता होलान्, जो डिप्रेसनले ग्रस्त छन् । अबको विश्वमा डिप्रेसनले भयावह रुप लिँदैछ । यसको बाछिटा हाम्रो समाजमा पनि परिसकेको छ । हाम्रा वयस्क, युवा, केटाकेटीसमेत डिप्रेसनको रोगी बन्दैछन् ।
आखिर किन अहिले डिप्रेसनले हामीलाई लखेट्दैछ ? किन हामी यसको चंगुलमा फस्दैछौं ?
यहाँ एक आध्यात्मिक गुरुले यिनै प्रश्नहरुको जवाफ खोजेका छन् । किन हुन्छ डिप्रेशन ? सद्गुरु जग्गी बासुदेवको भाषामाः
सानो बेलामा विरामी हुदाँ फाइदा पनि हुन्थ्यो । एक त परिवारको ध्यान तपाईंमा केन्दि्रत हुन्थ्यो । अर्को, स्कुल जानु पर्दैनथ्यो । मानिसहरुको ध्यान तपाईंप्रति केन्दि्रत हुने भएकैले विरामी कसरी हुने भन्ने कुरा तपाईंले सानैमा सिकिसक्नु भएको थियो ।
तर, जब तपाई विवाह हुन्छ, त्यसपछि भने तपाईंले मानसिक रुपमा विरामी हुने कला सिक्नु हुन्छ ।
मानिसको ध्यान तपाईंमा केन्दि्रत होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने जानुस् एउटा कोठामा बस्नुस् र भन्नुस् मलाई डिपे्रसनको समस्या छ । मानिसहरुको ध्यान स्वतः तपाईमा केन्दि्रत हुन थाल्छ ।
त्यसैले, आˆनै शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि यो परिस्थिति बनाउन आवश्यक छ । यदी यो कुरामा मन बनाउन सकिन्छ भने अन्य कुरामा पनि यस्तै तरीकाले मन बनाउन सकिन्छ । त्यसैले, समय आइसकेको छ, यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी भैसकेको छ । मानसिक रुपमा, शारीरीक रुपमा रसायनिक रुपमा तथा उर्जाको दृष्टीले पनि तपाईंले यो बुझ्न आवश्यक छ कि विरामी भएर, दुखी भएर वा डिप्रेशनमा परेर बस्नुको कुनै फाइदा छैन । यसले कुनै लाभ पनि मिल्दैन । बरु खुशी, आनन्दपूर्ण तथा उत्साहपूर्ण तरीकाले बाँच्नमा जति फाइदा छ, त्यो अरु कुरामा कतै छैन । र, तपाईंले यो कुरा सबैलाई बताएमा उनीहरुले पनि तपाईसित त्यस्तै व्यवहार गर्न थाल्नेछन् ।